Bentley Systems na-ahọpụta Dr. Nabil Abou-Rahme dịka onye isi nyocha - Geofumadas
Eprel, 2019 innovations, Microstation-Bentley
Ụlọ akwụkwọ Bentley Institute's Progress Development Institute na-agba mbọ ịkwado ọrụ ngosi nke gosipụtara uru nke akụrụngwa abụọ ejiri rụọ ọrụ.
London, United Kingdom - Ihe omuma nke ihe ndi ozo ga n'iru - Eprel 10, 2019 - Bentley Systems, Incorporated, onye ndu ụwa na-eweta ngwanrọ ngwanrọ zuru ezu iji bulie atụmatụ akụrụngwa, iwu na arụmọrụ, taa kwupụtara na Dr. Nabil Abou-Rahme esonyela Bentley dị ka Chief Research Officer maka Bentley Institute's Academies nke Ọganihu Digital. Ọ ga-arụ ọrụ n'ọfịs Bentley nke London ma duzie mbọ Bentley na nyocha ọganihu dijitalụ, na-arụkọ ọrụ na gọọmentị, mahadum na ndị ọhụụ ụlọ ọrụ iji kwalite azịza ohuru maka ọganihu nke akụrụngwa. Emeputara ohuru oru ya taa nye ndi ozo nyocha Ihe omuma nke ihe ndi ozo onye zutere na Ụlọ Akwụkwọ Bentley nke London Digital Advancement Academy.
Dr. Abou-Rahme sonyeere Bentley site na ụlọ ọrụ na-ahụ maka mmekọrịta mba ụwa Mott MacDonald, ebe ọ keere òkè na mgbanwe dijitalụ, n'oge na-adịbeghị anya dị ka isi nke akụrụngwa ọgụgụ isi na onye ndu ụwa zuru ụwa ọnụ maka sayensị data, na tupu nke ahụ, dịka Onye isi nke ngalaba ọgụgụ isi na-ahụ maka ọgụgụ isi. Ọrụ ya malitere site na itinye nyocha na njikarịcha na njikwa netwọkụ na thelọ Ọrụ Transportgbọ njem, ebe ọ gara n'ihu na-ahụ maka ìgwè nyocha ma mezue doctorate. Nkọwa teknụzụ ndị na-esite na ndụmọdụ ya gụnyere nkọwapụta maka EU ITS Direction, ntinye nke usoro ịkwụ ụgwọ enweghị akara nke ndị ụlọ akụ na-ebute njem na South Africa na mmepe nke usoro ndị na-arụ ọrụ maka 'ezi okporo ụzọ' na na United Kingdom
Bentley Systems CEO Greg Bentley kwuru, “Obi dị anyị ụtọ ịnabata Dr. Abou-Rahme isonyere anyị na ịmalite ọrụ anyị dị ka onye isi nyocha. N'oge na-adịbeghị anya, anyị enweela injinịa akụrụngwa site na ejima dijitalụ, site na ịmekọrịta teknụzụ iji n'otu oge mezuo ihe ndị dị mkpa ị chọrọ maka ọnọdụ dijitalụ, ihe dijitalụ, na usoro iheomume dijitalụ. N'ihi ya, ihe kwesịrị ekwesị maka entlọ Akwụkwọ Bentley Institute of Digital Advance na-arụ ọrụ na ụlọ ọrụ nyocha a na-enyocha iji chọpụta ma gosipụta uru na-arịwanye elu nke a ga-enweta site na ejima dijitalụ akụrụngwa. "Site na njikọta ya pụrụ iche nke akụrụngwa injinia nka na nyocha nka, yana ịnụ ọkụ n'obi na-efe efe iji 'gaa dijitalụ,' Nabil na-enye ihe dabara adaba iji duzie mbọ ndị a."
Dr. Abou-Rahme kwuru, sị: “Bentley nwere nkwa doro anya iji mee ngwa ngwa nke teknụzụ dijitalụ, gụnyere ọganihu BIM site na ejima dijitalụ. Akụkụ dị mkpa nke nchọpụta ọganihu dijitalụ bụ ihe ngosipụta nke ọrụ ngosipụta, usoro nkwado nke na-enye anyị ohere inyocha nkà nke ga-ekwe omume, ebe anyị na-etinye agụmakwụkwọ kachasị mma, ọrụ nka na ụlọ ọrụ mmepụta ihe n'ime otu ndị ahụ. Ntinye aka anyi gakwara n’oru iji kwado ulo oru mmuta site na nkwado na ime ka teknụzụ anyi dika ihe mmuta na mmepe. Emepe emepe na nkwonkwo nke Bentley mebere nke ọma, enwerekwa m obi ụtọ iduzi Pọtụfoliyo a n'akụkụ usoro ọzọ.
Abou-Rahme, kwụrụ ụgwọ engineer, esetịpụ a PhD na Bayesian ọnụ ọgụgụ Southampton University, a Master nke Science si University College London, a okokporo ogo obodo engineering si Imperial College London na a akwụkwọ nke general management nke Roffey Park.
N'okwu ya taa na Nzukọ Ọdịnihu nke Ọdịnihu, nzukọ abụọ nke ọkachamara ụlọ ọrụ, ndị na-eme nnyocha na mahadum na ndị isi echiche iji kwurịta ọdịnihu nke ihe onwunwe, Dr. Abou-Rahme zoro aka na ọtụtụ ọrụ nkwado site na Bentley Institute gburugburu ụwa, gụnyere ọrụ ngosi na University College London, Mahadum Cambridge na Imperial College, ma gbaa ndị nwere mmasị nwere ike imekota na ọrụ ngosi ngosi n'ọdịnihu iji kpọtụrụ ya na Bentley.Institute@bentley.com.
Banyere Ụlọ Akwụkwọ Na-ahụ Maka Ọganihu Ọganihu Ụlọ Ọrụ Bentley Institute
An ụzọ nke Bentley Systems, Digital Advancement academies Bentley Institute na-enye a pụrụ iche na-achọpụta ihe ọhụrụ na-anọpụ iche na n'ihu ọha-atụle ihe ịma aka na ihe ịga nke ọma na-ewu gburugburu ebe obibi, na iji mee ngwangwa na-ebuli dijitalụ atụmatụ (BIM). Digital Advancement academies jikọtara ndị ụlọ ọrụ na-eme ka a mkpali maka mgbanwe nke ihe ọmụma, na-eji a usoro-centric na-akwado mmejuputa zaa dabeere na ya pụta na ihe e kere eke na ime ihe nke digital na n'ụzọ anụ ahụ akụ obibia.
Bentley Systems bụ onye na-eweta usoro nchịkwa nke ngwanrọ maka ndị injinia, ndị na-emepụta ihe, ndị na-arụ ọrụ ụlọ, ndị na-ewu ụlọ na ndị nwe ụlọ maka imewe, ịrụ ọrụ na ịrụ ọrụ akụrụngwa.
Bentley Systems na-ewe ihe karịrị ndị ọrụ 3,500, na-enweta ego ha na-enweta kwa afọ nke $ 700 nde na mba 170, ma tinye ihe karịrị $ 1,000 ​​ijeri na nyocha, mmepe na nnweta kemgbe 2012. Kemgbe ọ malitere na 1984, ụlọ ọrụ ahụ ka bụ nke ọtụtụ. nke ndị guzobere ya ise, bụ ụmụnne Bentley. Bentley Ekekọrịta Azụmahịa na NASDAQ Private Market; Onye ọrụ mmekọrịta dị mkpa Siemens AG enwetawo oke osisi na-enweghị ịtụ vootu. www.bentley.com
Previous Post«Previous Leica Geosystems na-enye ngwá ọrụ ọhụrụ iji weghachite data data
Next Post Chọta elu nke ụzọ na Google EarthNext »